Ny Linux Foundation sy ny Microsoft dia miara-miasa amin'ny fanaparitahana ny tariby herinaratra | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 26/09/2021 12:23 | About us
Ao anatin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny LF Energy sy Microsoft hanaparitahana ny tariby mandeha amin'ny herinaratra, la Dr. Audrey Lee, Tale zoky ny paikady angovo ao amin'ny Microsoft, voafidy hisolo tena ny mpikambana ankapobeny ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny LF Energy Foundation.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Swapnil Bhartiya an'i TFiR dia niresaka momba ny tanjona i Audrey Lee ny fanaparitahana herinaratra avy amin'i Microsoft ary ny fotoana iaraha-miasa amin'ireo mpikambana ao amin'ny LF Energy.
Audrey lee nitarika fifamofoana tao amin'ny Microsoft, izay vao niditra tao amin'ny LF Energy Foundation, ary Ramatoa Lee dia nanamarika fa tsy misy fikambanana, na ny hery toa an'i Microsoft, na ny mpanjifa na ny fitaovana ampiasaina, afaka miatrika ireo fanamby miandry azy irery aza.
Manatanteraka ny anjaranao, Microsoft dia nanolo-tena fa amin'ny 2030, 100% ny herinaratra fampiasany, 100% amin'ny fotoana, izy io dia havalin'ny fividianana angovo tsy misy karbonina.
Nanamarika i Audrey, ary miombon-kevitra izahay fa tsy misy orinasa tokana, na ny hery toa an'i Microsoft, na ny mpanjifa na ny fitaovana ampiasaina, afaka mifanaraka amin'ny fanamby atrehantsika.
Mba hanaovana ny anjarany dia nanolo-tena i Microsoft fa, amin'ny taona 2030, 100% amin'ny fampiasany herinaratra, 100% amin'ny fotoana, dia hifanaraka amin'ny fividianana angovo karbonika aotra.
Ezaka tokony hataon'ny orinasa rehetra hanovana ny toekarentsika sy hamonjeny ny planeta ity. Ny fanoloana ny motera, ao anatin'izany ny lasantsy fôsily, izay herin'ny toekarentsika manerantany dia tsy vitan'ny fifaninanana mialoha ny fifaninanana fotsiny, fa diabe iraisan'ny fiaraha-miasa hampiatoana ny fiovan'ny toetrandro sy ny fandrahonana lehibe ara-tsosialy sy toekarena ampanantenainy.
Voalaza fa ny mpikambana ao amin'ny LF Energy dia resy lahatra fa misy volamena amin'ny faran'ity avana ity izay tsy manapotika renivohitra ny fanavaozana, fa mamela bebe kokoa hatao amin'ny kely kokoa. Raha ny filazan'i Lee, Microsoft "dia tsy afaka mifehy ny valiny amin'ny anaranay " ary tsy mahafehy ny famokarana herinaratra. Na izany aza, afaka miara-miasa amin'ny hafa i Microsoft mba hitaomana ny fomba fividiananao herinaratra ary handehananao mankany amin'ny fanaparitahana ny tadin'ny herinaratra iray manontolo.
Ity fampiasana ny fanavaozana iraisan'ny, hery sy toe-tsaina izany no antony misy ny LF Energy. La ny decarbonisation dia tsy lafo intsony, ary tsy safidy akory, ary tsy tokony hoheverina ho tombony mifaninana natokana ho an'ny vitsivitsy izy io. Izy io dia singa iray tena ilaina amin'ny famoronana ho avy maharitra ho an'ny rehetra.
Ary ny orinasa rehetra, ny fikambanana rehetra, ny sehatry ny toekarena rehetra dia tsy maintsy mandeha. Dolara amina miliara maro no holaniana hanovana ny toekarena, ary ny titanan'ny indostria dia tsy maintsy mitarika lalana.
Ny LF Energy no mitarika ireo tetikasa loharano malalaka misokatra farany hahafahana manatanteraka ity iraka ity. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny hafa, ao anatin'izany ny Microsoft, ireo teknolojia ireo dia afaka mipoitra haingana kokoa ary avy eo miparitaka manerana ny indostrian'ny angovo.
Araka ny nasongadin'ny Dr. Lee tamin'ny resadresaka nifanaovany, LF Energy dia sehatra fiadian-kevitra iray ihany koa hanampiana amin'ny fanovana ny fanovana eo amin'ny tontolo mifehy. amin'izay izy ireo koa dia mandray ny fanovana ara-bola sy ara-teknolojia.
Ireo orinasam-panompoana angovo ankehitriny dia toy ny ampihimamba fifandraisan-davitra efa am-polony taona vitsivitsy lasa izay, satria ny telecommunication dia nanararaotra ny fahafahan'ny Internet ary niova.
Eo amin'ny hantsam-bato toa izany ihany koa ireo orinasan-tsivana angovo ankehitriny, satria toy ny mpanara-maso manara-maso azy ireo, dia mila fanovana mifehy ihany koa izy ireo, ka mamporisika ny politika ary indrindra tsy manakana ny fampiasam-bola amin'ny haitao.
Tsy maintsy atao ny orinasa, fikambanana ary tompon'andraikitra amin'ny governemanta - izany hoe isika rehetra - no tafiditra ao anatin'io ezaka io mba hahafahany miroso amin'ny hafainganana ilaina amin'ny famitana ny olana.
Na ny vahaolana ho hita amin'ny teknolojia vaovao, ny fisainana vaovao, ny fitsipika vaovao, na ny azo inoana fa ireo telo ireo sy ireo anton-javatra maro hafa, dia ho eo ny LF Energy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ny Linux Foundation sy Microsoft dia miara-miasa amin'ny fanaparitahana ny tariby mandeha amin'ny herinaratra